Turjumaan xumo haysata bukaanka Soomaalida | Somaliska
Turjumaan xumo haysata bukaanka Soomaalida
Soomaalida caafimaadka u raadsata hosbitaalada Sweden ayaa waxaa haysata tujumaan xumo, iyadoo dadka hada ka turjumada hosbitaalada aysan ahayn kuwo haysta shahaadada turjumaanimada caafimaadka, sida ay warisay idaacada Sweden.
Dhaqtar lagu magacaabo Annika Esscher ayaa baaritaan ay ku samaysay saamaynta arintaan waxay sheegtay in laga yaabo in haween Soomaali ah ay u geeriyoodeen turjumaan xumo sanadihii la soo dhaafay. Turjumaan la’aanta Soomaalida haysata ayaa ah mid aan xal loo hayn sida lagu qoray mowduuca.
Soomaalida ayaa la sheegay in aysan qaadan karin shahaadada turjumaanimada caafimaadka. Kammarkollegiet oo ah hay’ada qaabilsan bixinta shahoodooyinka turjumaanada caafimaadka ayaa sheegtay in markii ay isku dayeen in ay Soomaalida u bandhigaan dhibaatada jirta aysan helin dad badan oo xiisanayna in ay turjumaan noqdaan. Kuwii muujiyay xiisaha ayaa imtixaano laga qaaday kuwaasoo ku dhacay. Sida ay sheegtay Ivett G Larsson oo ka tirsan shaqaalaha Kammarkollegiet.
Waxay intaas ku dareen in ay qaban doonaan imtixaano cusub sanadka soo socda. Balse inta ka horeysa ayaa hosbitaalada Sweden ay isticmaali doonaan turjumaano aan la hubin aqoontooda oo aan haysan shahaado. Dr Annika Esscher ayaa sheegtay in ay la kulantay Soomaali diiday in loo qabto turjumaan maadaama ay tayada turjumaanada aad u liidato.
Soomaalida Sweden ayaa cabashooyin joogto ah ka qaba daryeelka caafimaadka wadanka, iyadoo taasi ay u sii dheertay turjumaan xubo.
Lena Rösell oo shaqada ka fariisatay
Qeylo dhaan laga soo saaray xaaladaha ay wajahi doonaan dhalaanka keli socodka ah marka lagala noqdo taageeradii la siin jiray
“Denmark waxay dagaal kula jidhaa diinta Islaamka”
waan ku salamey jimcale walalkis. runti waa wax jira arinkaasi turjimano badan oo somali ah oo waxbo aqonin aya lugu qabanaya sbitalada ayako aqoon lehen wiliba waxa ku sii dheer ciibta eey ka sii shegayan war jecli hadi xitaa xanun lugugu sheego qofkaste ayu u sheegaya wax la qariyo ma aqanan marka aniga waxan dhihi laha turjumano speciella ah ha lo qabto thanks jimcale.
TURJUBAAN AYAAN U BAHANAHAY XAL MAAHA WAA INAAD MASULIYAD ISA SAARTA OO AAD BARATAAN AFKA WADANKA ILAYN ADAA KU NOOLE says:
July 4, 2014 at 02:10
WAXA AYAAN DARO AH IN DADKII SOMALIYEED IS DHIGTEEN OO AAD ARKAYSO MEELAHA QAAR DAD JOOGAY WADANKA SHAN SANO HABASE AHAATE AAN LABA KALMADOOD ISKU XIDHAYNIN, WAXA KALOO JIRTA MENTALITY AY SOMALIDU AMINSAN YIHIIN OO AH IN HADIII QOFKU WAYNAADO AANU WAXBA BARAN KARIN AMA ANAY MASKAXDIISU QADI KARIN WAX KALE WAA BEEN TAASI WAXAANA IDINKA JAAHIL SARAYA SHEEKH MUSTAFE XAAJI ISMACIIL HARUUN MUXAADARADA UU KAGA HADLAYO AWOODAHA ILAHAY INA SIIYEY EE AYNU DAYACNAY https://www.youtube.com/watch?v=K3dfq47HVYU WAA KAN LINKSKAN MUXADARAN HADAAD SI FIICAN U DHAGAYSATAAN WAXA AAD OGAYNAYSAAN AWOODO BADAN OO ANAD IS LAHAYN WAAD HAYSATAA RUNTII, MARKAA DADKA WAXAAN ODHAN LAHAA INAAD BARATAAN AFKAN IDINKA AYAY IDIIIN FIICAN TAHAY INTII NOLOSHAADU KU XIDHMI LAHAYD TURJUBAAN AAN ISKU BARAARUJINO SIDII AAN U BARAN LAHEEN AFKA, TUSAALE AHAAN ANIGA WADANKAN WAXAAN JOOGAY AFAR SANO WAXAAN DHAMEEYEY SFI GRUND SKOLAN WAXAAN DHIGTAA DUGSI SARE WAXAAN RAJAYNAYAA INAY DADKU DADAALAN.